जो तेज गाडिहरु युरोप अनि विश्व मा हुनुहुन्छ | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > जो तेज गाडिहरु युरोप अनि विश्व मा हुनुहुन्छ
के तपाईं कहिल्यै केहि द्वारा युरोप भ्रमण गर्न चाहन्थे छन् पुराना, एक रेल जस्तै? यसलाई कसरी सम्म यात्रा गर्न ध्वनि गर्छ 300 प्रति घण्टा किलोमिटर? युरोप उच्च गतिको रेल को एक ठूलो नेटवर्क आफ्नो गन्तव्यमा तपाईं चाँडै हुनेछ भनी छ. उच्च गतिको रेल सेवा मात्र मुख्य शहर मा रोक्न. यो रेल 1st र 2nd वर्ग को सहज रथहरूलाई प्रस्ताव, साथै राम्रो खानपान सेवाहरू. यहाँ बारेमा थप छ सबैभन्दा छिटो युरोप मा रेल.
को अल्फा Pendular यात्रा पोर्चुगल को तट साथ, ब्रागा देखि फारो सम्म, र पोर्टोमा रोकिन्छ, कोइमब्रा, र लिस्बन. भन्दा कम6घण्टा, तपाईं देश को अन्य पक्ष पुग्न र बोर्ड मा उत्कृष्ट सुविधाहरु आनन्द उठाउन सक्छौं.
Alvia गाडिहरु युरोप मा
को Alvia, युरोप दावेदार मा स्पेनी सबैभन्दा छिटो गाडिहरु छन्, अप गर्न को गति मा लामो दूरी यात्रा 250 प्रति घण्टा किलोमिटर. स्पेन मुख्य शहर जडान बाहेक, यो रेल पनि आधुनिक सुविधाहरु प्रदान गर्दछ. ती खुट्टा लागि पर्याप्त ठाउँ भन्दा बढी ठूलो reclining सिट छन्, एक तह टेबल, र अडियो र भिडियो outputs.
युरोप मा ICE रेल छिमेकी देशहरूमा जर्मनीमा सबै प्रमुख शहर र धेरै शहर जडान. प्रतिघण्टा सेवाहरू यो आधुनिक उच्च गतिको रेल धेरै प्रदान गर्दछ: अन्य कुराहरु, वातानुकूलन संग रथहरूलाई, को खुट्टा सुत्छन् ठूलो ठाउँ, भिडियो स्क्रिनहरू, र अडियो प्रणालीहरू. ICE ले तपाईंलाई जर्मनीमा कतै लैजान्छ र अन्य देशहरूमा यात्रा गर्न उत्तम तरिका हो, जस्तै अस्ट्रिया, फ्रान्स, र स्विट्जरल्याण्ड.
तीर रेल (पूर्व Eurostar इटाली रूपमा ज्ञात) आधुनिक उच्च गति को नेटवर्क बनाउन र तिनीहरूले युरोप मा सबैभन्दा छिटो गाडिहरु मा इटालियन दावेदार हो. संग यात्रा तीर यस्तो रोम धेरै इटालियन शहर को मनमा द्रुत जडान रमाइलो गर्न, भेनिस, फ्लोरेन्स, मिलान, भियना, र नेपल्स. तपाईं मात्र इटाली मा सबै भन्दा लोकप्रिय शहर तर पनि इटालियन देहात को सानो सहर गर्न सबैभन्दा छिटो सम्भव जडान आश्वासन कि Le Frecce रेल तीन प्रकार हो.
Eurostar युरोप मा सबैभन्दा छिटो गाडिहरु लागि समुद्र विजेता अन्तर्गत छ
को Eurostar उच्च गतिको रेल लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ लन्डन बाट यात्रा ब्रसेल्स वा पेरिस गर्न. यो रेल मार्फत तपाईं हुनेछ च्यानल सुरुङ लन्डन को मनमा. जबकि यात्रा पानी आधुनिक उच्च गतिको रेल सबै सुखसुविधा आनंद.
यी उच्च गतिको रेल अस्ट्रिया बीच रन, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, हंगेरी, र स्विट्जरल्याण्ड. Railjet रेल राज्य-को-को-कला मोडेल ठूलो सान्त्वना उच्च गतिको सेवा भेटी गरेर यात्रा अनुभव गर्न एक मोड दिनको छन्. प्रभावशाली जहाजमा सुविधाहरु र उत्कृष्ट सेवा सुविधाहरू केही छन्. अप गर्न को गति 230 प्रति घण्टा किलोमिटर पुगेको. को Railjet तपाईं यस्तो जर्मनी रूपमा छिमेकी देशहरूमा पनि अस्ट्रिया भर यात्रा र गर्न अनुमति दिन्छ, स्विट्जरल्याण्ड, र हंगेरी.
TGV – सबैभन्दा छिटो गाडिहरु युरोप मा हाम्रो छानिने छ
सबै फ्रान्स माथि र बाहिर संचालन, TGV पारंपरिक रेल लागि दुनिया गति रेकर्ड धारण. मा3अप्रिल 2007, TGV POS ट्रेन पुग्यो 357.2 मील (574.8 मी / घन्टा), यो युरोप मा पाँचौ तेज रेल बनाउने. TGV trainset पनि पुगेको छ 515.3 मी / घन्टा (320 मील) विशेष परीक्षण अवस्थामा र द्वारा भङ्ग कहिल्यै छ मौसम अवस्था जस्तै बाक्लो कुहिरो वा अन्य.
à ग्रान्ड VITESSE रेल एक मा तपाईं हुनेछ रोमान्टिक रेल यात्रा पेरिस वा जहाँसुकै भू-मध्य किनारा यदि तपाईं त साथ, कृपया. एक TGV टिकट किन्न र एउटा चलचित्र पकड विश्व प्रसिद्ध कान्स मा र मजा लिनुहोस् सुन्दर दाखबारी को लयर उपत्यकाको, त्यसपछि. यस्तो मार्सेइल रूपमा भ्रमण शहर आफ्नो सवारी अलि बढि साहसिक थप्न, लियोन, र बरद.
Montpellier मार्सेइल गाडिहरु गर्न
मार्सेइल गाडिहरु राम्रो
पेरिस मार्सैय गाडिहरु गर्न
मार्सेइल गाडिहरु गर्न लियोन
SJ स्वीडिश हाई-स्पीड युरोपको सब भन्दा छिटो ट्रेनहरू मध्ये एक हो जुन विशेष गरी स्क्यान्डिनेभियाई भूभागको लागि डिजाइन गरिएको हो र माथिको गतिमा चल्छ। 200 प्रति घण्टा किलोमिटर. यी रेलका सान्त्वना को एक उच्च स्तर प्रस्ताव र तपाईं जस्तै धेरै स्वीडिश शहर को केन्द्र छिटो यात्रा गर्न अनुमति स्टकहोम, Gothenburg, र मैल्मो. यी उच्च गतिको रेल पनि कोपेनहेगन सीधा यात्रा (डेनमार्क) युरोप मा सबैभन्दा लामो सडक र रेल पुल मार्फत, शानदार Oresund पुल.
नयाँ र पुराना एक मा - युरोप मा तेज रेल प्रस्ताव संभावना छ कि. माथिको सूचीबाट रेल चयन गर्नुहोस् र हामी तपाईं प्राप्त अनुभव पाउनेछन् पक्का.
You can book your trains tickets among the Fastest trains in Europe on सुरक्षित-एक-ट्रेन लगभग हरेक गन्तव्य मा माथि enlisted3मिनेट, मा सस्ता रेल टिकट दर र obnoxious बुकिंग शुल्क को राहत!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#fasttrains #highspeedtrain रेल सुझावहरू रेल यात्रा